महामारीमा पनि छाडेनन्..
बिस्तारै कोरोना पीडितहरु बढ्दै जान थालेका छन् । डाक्टरहरु नै भन्छन्– सरकार र जनताको पक्षबाट जुन प्रकारले खेलाँची भइरहेको छ, त्यो गम्भीर परिणाम आउने खालको छ । हेर्दे गए हुन्छ संक्रमितको संख्या हलक्कै बढेर जानेछ । खासगरी संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा ढिलो गरेकै हो । सीमा बन्द, एयरपोर्ट बन्द र मुलुकवासीलाई घरमै बसौं भनेर कडाखालको लकडाउन गर्न अबेर भएकै हो । विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गर्दा एयरपोर्ट र सीमाहरुमा निर्वाध आवतजावत गर्न दिइयो । एउटा जरो नाप्ने मिटरलाई कोरोना संक्रमित छ कि छैन भनेर बुझ्ने आधार बनाइयो । अझ लकडाउन घोषणा गरेपछि जनतालाई क्यारेनटाइन र आइसोलेसनमा राख्ने कुनै तैयारी नै गरिएन । ज्यालादारी गरेर हातमुख जोर्ने बर्गका बारेमा केही सोचिएन । तिनीहरुलाई हात धुने, मास्क लगाउनेलगायतका सावधानीका बारेमा सुविधा दिइएन । सचेत गराइएन । कालाबजारी मौलाउनुको कारण सरकारको कमजोरीले हो ।
अत्यावश्यक बस्तुहरु पसलबाट हराउँदै गएका छन् । ठूलो मात्रामा मेडिकल मास्कहरु प्रहरीले बरामद गर्ने क्रम सुरु भएको छ । एकातिर मास्कमा कालोबजारी, अकोतिर खाद्यान्नसमेत लुकाउने क्रम । तरकारीमा ठूलो मूल्यबृद्धि । सरकार व्यवस्थापन गर्न नसकेर मुकदर्शकमात्र बनिरहेको छ । यतिमात्र होइन, यस्तो महामारीमा समेत मन्त्रीहरु मौकामा चौका हान्ने भनेर भ्रष्टाचारमा मुछिन थालेका छन् । जनतालाई बाहिर ननिस्कनु भनेर आफू गुफा पसेका प्रधानमन्त्री अझै निस्केका छैनन् । मन्त्रीहरु भ्रष्टाचार गर्ने मौकाको लाभ उठाइरहेका देखिन्छन् । स्वास्थ्यमन्त्री कोरोना उपचार गर्ने सामान खरिदमा भ्रष्टाचारी देखिएका छन् भने पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई एयरलाइन भाडा भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । यी दुई मन्त्रीलाई काविल भन्ने प्रम ओली कारवाही गर्न सकिरहेका छैनन् ।
समाचारअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेढ अर्वको पीपीई, किट्स, अन्य मेडिकल सामग्री खरिद गर्दैछ । ती सामान चीनले सरकारी रेटमा दिन्छु भन्दा मिलोमतो गरिएको छ । एउटा ५ हजारमा पाइने पीपीईलाई मिलोमतोमा १५ हजारसम्म तिर्न तैयार भएको दृष्टान्टले मन्त्रीहरुले गरेका भ्रष्टाचार छताछुल्ल हुनपुगेको हो ।अरु त अरु चीनबाट ७ डलरमा मास्क ल्याइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यो ठूलो कमिशन खाने प्रपञ्चको सुरुआत भइरहेको छ । कसकसले यो कमिशन खाने हुन्, बिस्तारै सतहमा देखिने छ । राष्ट्रिय विपत्ति, महामारीको समयमा समेत खान नछाड्ने, यो त अति हो । यस्ता भाइरस झन डरलाग्दा हुन्छन् ।
उता प्रमुख विपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यस्तो आपातकालमा पनि सहमतिको सरकार चाहियो भनेर बेसुरको बाजा बजाएका छन् । आमनागरिक भयभित छन्, गरिबहरु रोग, भोक र शोकले मरिरहेका छन् । तिनको उद्धारमा खट्नुपर्ने कांग्रेस कार्यकर्ता परिचालन गर्नसमेत सकेको छैन ।
राष्ट्रिय संकटका बेलामा सबै एकजुट भएर लड्ने विश्व इतिहास छ । नेपालमा भने प्रतिपक्षी सरकारमा जान हतारिनु दुर्भाग्यजनक घटना हो । विभिन्न दलको सहमति सरकार बन्ने बेलासम्म कोरोना भाइरसले कतिको ज्यान लिइसक्ने हो । यो समय सचेतना बढाउने, घरैमा बसेर संक्रमण रोक्न वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिपक्षीलाई सरकारमा जाने हतारोले जनतामा नेपाली कांग्रेस अरु गनाउन पुगेको छ । राष्ट्रिय संकटलाई सत्तामा जाने भ¥याङ बनाउन खोज्नु कांग्रेसको अर्को हार भनेर विश्लेषकहरुको टिप्पणी रहेको छ । सरकार भ्रष्टाचारी अनि प्रमुख प्रतिपक्षी गैह्रजिम्मेवार । अव नेपाली जनताले आश गर्ने कसको ? एक त कोरोनाको ओखती बनिसकेको छैन । त्यसमाथि भगवान भरोसे भएको बेलामा जनताले नकारिसकेको कांग्रेसले ५ वर्ष पनि कुर्ने धैर्य नराखेर सत्ताको लोभ देखाएको छ । अहिलेसम्म ५ जनामात्र संक्रमित देखिएका छन् । सावधानी अपनाउन सकिएन र जनतालाई हिम्मत बाध्न हौसला प्रदान गरिएन भने लकडाउन तोडेर, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसेकाहरु भागेर संक्रमण झन ठूलो महामारी बन्नसक्छ । जनप्रतिनिधि, जनतामा विश्वास राखेर राजनीति गर्ने जुनसुकै दलको पहिलो काम भनेको जनतालाई अनुशासनमा बस्न र संक्रमण बढ्नबाट रोक्नु हो । निश्चित छ, आउने दिनमा संक्रमितहरु अरु बढ्नेछन् । हाम्रो तैयारीको कमजोरी र हामी आफैको असावधानीले पनि यो खतरनाक सम्भाबना बढाएको हो । अव पनि नचेत्ने हो भने ठूलै महामारी आउनेछ, हामीले थेग्न सक्नेछैनौं । यसकारण पनि हामीमा मानवीय संवेदना र सचेतता हुनु जरुरी छ ।
सरकार यही हो । प्रमुख विपक्षी र अन्य विपक्षी र नागरिक समाज पनि यिनै हुन् । लाग्छ, नेपाली जनताले अव मुख ताक्ने भनेको पशुपतिनाथको मात्र हो । जनताको स्वास्थ्यमा हुनसम्मको खेलबाड गरिरहेको राजनीतिले । यस्तो पनि लोकतन्त्र र लोक सरकार हुन्छ र ? यस्ता गैरजिम्मेवार, जवाफदेहीहीनहरुलाई जनताले कहिलेसम्म सहेर र मानेर बस्ने हो । जनताले इमान नभएकाहरुलाई खबरदारी नगर्ने र आफै सचेत नहुने हो भने कोरोनाको भाइरसले जनतालाई नोक्सानी पु¥याउँछ, पु¥याउँछ । यी भ्रष्ट र इमान नभएकाहरुले राष्ट्रिय अस्तित्व र मानव सभ्यतामा समेत हानी पु¥याउन सक्नेछन् । जनताको चेतना जरुरी छ ।